Group Of Metro ကြွေထည်များအိန္ဒိယတွင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ
Metro Group သပိတ်မှောက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးခန်းနေရာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကြွေပြားများနှင့်ကြွေပြားအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်. မီးဖိုချောင်ကြွေပြားများသို့အိမ်ပြင်တွင်စတင်ခြင်းသည်ကြွေပြားကပ်နေရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည်ကြွေထည်များအမြဲရှိသည်. ၎င်း၏ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော, အနိမ့်အနေဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အဆင့်တွင်မြင့်မားသောအကြမ်းခံသောဂုဏ်သတ္တိများကိုသူတို့အားတစ်သက်တာလုံးအထိဖော်ဆောင်သည်. ခေတ်သစ်ကြွေထည်ကြမ်းခင်းများသည်အခြားအုပ်ထိန်းအမျိုးအစားများအပေါ်အကိုးရီးယားအားသာချက်ရှိသည်. ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်သစ်သီးကြောင်အုပ်ကြွပ်များ, စကျင်ကျောက်ကြွေပြားများ, စကျင်တံကြွေပြားများ, စကျင်တံကြွေပြားများ,.အမြင်အာရုံတွင်ကြွေပြားများနှင့်သဘာဝကျောက်တုံးများနှင့်သဘာဝကြမ်းခင်းပစ္စည်းများအကြားခွဲခြားရန်အလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ပါ.
ကြွေကြွေများသည်ခေတ်မီသောကြွေပြားများဖြစ်ပြီး,. ထို့နောက်သူတို့သည်ထူးခြားသောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ဖောင်းကြွနေကြသည်။. ဤဖြစ်စဉ်သည်ကြွေထည်များကိုခက်ခဲသော,. ကြွေထည်ကြမ်းခင်းကြွေပြားများကိုကြွေထည်များဖြင့်မကြာခဏတိုင်းတာသည်,. ကြွေပြားချပ်ချပ်များအတွက်ရိုးရှင်းသောကြွေထည်နှစ်ခုရှိသည်; ဤကြွေကြွေပြားများသည်ဖြတ်သန်းနေသောကြွေအုပ်ကြေးနန်းများနှင့် Glazed ကြွေအုပ်ထိန်းသူများဖြစ်သည်. ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်အာကာသ၏ကြာရှည်ခံမှုသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်.
1200 x 2400 MM ကြွေကြမ်းပြင်ကြွေပြားများ
800 x 2400 mm ကြွေပြားချပ်ချပ်
ဖြတ်သန်းနေသောကြွေထည်ကြမ်းခင်းကြွေပြားများကို gauged corcelain tiles ဟုလူသိများသည်. သူတို့မှာတက္ကဆက်အရောင်နှင့် tile တစ်ခုလုံးကိုတသမတ်တည်းအရောင်နှင့် texture ရှိသည်။ သူတို့ဟာအလွန်အမင်းတာရှည်ခံပြီး 0.5% ထက်နိမ့်ကျတဲ့စုပ်ယူမှုနှုန်းနည်းတယ်။. ဤကြွေများသည်စီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်နေရာများရှိယာဉ်အသွားအလာမြင့်မားသောဒေသများအတွက်မြင့်မားသောကြော်ငြာများကိုအထူးအကြံပြုလိုသည်. ကြွေထည်နံရံများနှင့်ကြွေထည်နံရံများ, ကြွေပြားနံရံများနှင့်ကြွေထည်နံရံများနှင့်ကြွေထည်နံရံများနှင့်ကြွေထည်နံရံများအတွက်ကြွေထည်များနှင့်ကြွေထည်များနှင့်ကြက်သွန်ဖြူများတပ်ဆင်ထားသည်. မီးဖိုချောင် area ရိယာတွင်စိုက်ခင်းများ၌၎င်းတို့ကိုကြွေကြမ်းကြမ်းခင်းများအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ကြွေထည်ရေတံခွန်, ရေချိုးခန်းကြွေကြမ်းခင်းကြွေပြားများနှင့်အများကြီးပို.
Glazed ကြွေအုပ်ထိန်းသူများသည်ကြွေထည်တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်. အရောင်နှင့်ပုံစံကိုအပျော့စ်ကိုခွင့်မပြုသည့်0တ်စုံအလွှာတစ်ခုပြုလုပ်သည်.မြင့်မားသော glaze, အရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းကြောင့်၎င်းတို့ကိုပြင်ပ၌ကြွေပြားကပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကောင်းစွာအကြံပြုထားခြင်းမဟုတ်ဘဲဖြတ်သန်းနေသောကြွေအုပ်ထိန်းသူများထက်အကြမ်းခံမှုနည်းပါးသည် . ကြွေကြွေပြားသည်ပိုမြင့်မားသော PEI အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တိကျသော,. Pei Rating ကိုတစ် ဦး မှငါးနှစ်အထိကြွေကြွေခြင်းအင်စတီကျု့ကထုတ်ဝေသည်. အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်မြင့်မားလေ, အလွန်ထူထပ်သောတင်းကျပ်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံသည်. ကြွေပြားမြင့်မားသောကြွေထည်များအမြင့်ဆုံးနေရာများအတွက်အံ0ါးများအသင့်တော်ကြောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကဖော်ပြသည်။. ကြွေကြွေများသည် Monochromatic မှအမြင့်ပြင်းထန်သောကြွေထည်ကြမ်းခင်းမြေကြွေထည်များ, အဖြူကနေရောင်စုံကြွေကြွေပြားများအထိအရောင်များ, Wood Graute ကြွေပြားမှစကားများ, စကျင်ကျောက်ကြည့်ရှုသည့်ကြွေထည်, Mosaic ကြွေကြမ်းကြမ်းခင်းများ, သစ်ခုတ်လှုပ်သံပီးစ်, နှင့်ထိုကဲ့သို့သော hexagon ကြောင် tile အဖြစ်ပုံစံမျိုးစုံ.
ကျနော်တို့က ဦး ဆောင်ကြွေကြွေပြားထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြွေထည်နံရံနှင့်ကြွေထည်များနှင့်ကြွေကြမ်းကြမ်းခင်းများ၌အနက်ရောင်, အဖြူရောင်, မီးခိုးရောင်, အစိမ်းရောင်, အနီရောင်, အနီရောင်, ပန်းရောင်စကျင်ကျောက်,.